ကွန်﻿ပြူတာ﻿လောကမှ ဟာသများ ~ ကိုစစ်ကိုင်း၏ မှတ်စုများ
Ko Sagaing Friday, June 10, 2011 ဟာသ
ဂျီပုန်းလုပ်﻿နေတဲ့သား(ဂျီပုန်း = G-Talk တွင် Invisible ﻿ဖြင့်﻿နေသူ)
သား﻿ဖြစ်သူ အ﻿ပြင်မှ ﻿ပြန်လာရာ အ﻿ဖေ﻿ဖြစ်သူက ဆီး﻿ကြို﻿ပြီး ပြောလိုက်တာက...
ဟေ့﻿ကောင် မင်းမိဘ﻿တွေကို အရှက်ရ﻿အောင် မလုပ်နဲ့﻿နော်၊ မင်း ဂျီပုန်း(အခြောက်) ﻿ဖြစ်﻿နေတဲ့ အကြောင်းကို မင်းသူငယ်ချင်းဆီက ငါတို့သိ﻿ပြီး﻿ပြီ...
ဟို﻿နေ့က ငါ့သူငယ်ချင်းဆီက ကားတစ်စင်းလက်﻿ဆောင်ရတယ်။ ငါလည်း သူပို့﻿ပြီးသား﻿ဖြစ်﻿နေ﻿တော့ မ﻿ငြင်းရက်လို့ ယူထားလိုက်တယ်။ ဟိုတ﻿လောကလည်း ငါ့﻿မွေး﻿မြူ﻿ရေး အတွက်ဆို﻿ပြီး နွား﻿တွေ﻿ကော၊ ဝက်﻿တွေ﻿ကော ပို့လိုက်တယ်တဲ့﻿လေ၊ ငါ့လည်း ယူထားလိုက်ပါတယ် သူ့အားနာလို့။ ဒီ﻿နေ့လည်း ﻿ကြည့်ဦး စား﻿ကောင်း ﻿သောက်ဖွယ်﻿တွေ ငါ့ကို ပို့﻿ပေးတယ် ငါမ﻿ငြင်းပါဘူး လက်ခံထားလိုက်တယ်။
ဒုတိယတစ်﻿ယောက်က အံ့﻿သြ﻿ပြီး ﻿မေးရာ...
မင်းသူငယ်ချင်းက ﻿တော်﻿တော် ချမ်းသာတာပဲ﻿နော်...
ဟင်! ဒီ﻿ကောင်လား ချမ်းသာ﻿နေပါဦးမယ် ﻿ဖေ့ဘွတ်မှာ အကုန်﻿လျှောက်ပို့လို့ လက်ခံ﻿နေတာကွ!
IT သမားနှစ်﻿ယောက် Program တစ်ခု မှန်ကန်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ အကြောင်း ပြောနေကြရာ...
ငါလည်း ဒီ﻿ကောင်ကို တ﻿ခြား﻿နေရာက﻿နေခိုင်း﻿ကြည့်တာ မလုပ်ဘူး ဘာ﻿ဖြစ်﻿နေလည်း မသိဘူး။
ဒီ﻿ကောင် အလုပ်မလုပ်တာ တစ်ခုခု﻿တော့ မှား﻿နေ﻿ပြီ။
ထိုစဉ် သူ﻿ဋ္ဌေးက အနားမှ ﻿ဖြတ်သွား﻿ပြီး ပြောလိုက်တာက...
ဓဟေ့ အလုပ်မလုပ်တဲ့﻿ကောင် လစာ﻿ဖြတ်မှာ ﻿နော်
လူတစ်﻿ယောက်သည် သူ၏ဖုန်းကို ﻿ပြန်﻿ကောက်ယူလိုက် ﻿ပြန်ကိုင်﻿ပေါက်လိုက် လုပ်﻿နေသည်။ ပါးစပ်မှလည်း...
ကဲကွာ ﻿ဖြစ်ချင်ဦး။ ကဲကွာ ﻿ဖြစ်ချင်ဦး ဟု ﻿အော်ဟစ်﻿နေသည်။
ထိုစဉ် အနားမှ လူတစ်﻿ယောက်ကို ﻿ဖြတ်သွား﻿ဖြတ်လာ လူတစ်﻿ယောက်က လှမ်း﻿မေးရာ....
ဒီလူ ﻿အော်﻿ကြီးဟစ်ကျယ်နှင့် ဘာ﻿ဖြစ်﻿နေတာလည်းဗျ။
Smart Phone ကိုသုံး﻿ပြီး သူ့ထက် ဖုန်းက Smart ﻿ဖြစ်﻿နေလို့တဲ့ဗျာ...
phung bella June 19, 2012 at 1:30 PM